LCCI Knowledge sharing2– Win Bo Myint Accountancy Training Centre
LCCI Knowledge Sharing 2
Partnership (အစုစပ် လုပ်ငန်းအကြောင်း)
ဘယ်လိုမျိုး စီးပွားရေး လုပ်ကြသလဲ ?
စီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ဦးတည်းပိုင်အနေနဲ့ လုပ်တာတွေရှိတယ်။ တချို့က အစုစပ်အနေနဲ့ လုပ်ကြတာတွေရှိတယ်။ တချို့ကလည်း ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ လုပ်တာတွေရှိတယ်။ အဲဒီ့မှာ အဓိကအနေနဲ့ အစုစပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Partnership လုပ်ကြတာလဲ ?
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ လူတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ရင် ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပဲ လုပ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာ ငွေလိုလာပြီ။ လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်တာတွေ ရှိလာပြီ။ အဲဒီ့အခါကျရင် ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်။
ဘာကြောင့် Partnership လုပ်ငန်းတွေ မှာ သဘောတူညီချက် ထားဖို့ လိုမလဲ ?
ဒါပေမယ့် အဲလိုလုပ်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လုပ်ငန်းတွေ ပြန်ပြီးတော့ ဖျက်သိမ်းရတာမျိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် ဒီလုပ်ငန်းကနေမြတ်လာတဲ့ အမြတ်တွေကို ဘယ်လိုယူကြမလဲ၊ ပြီးရင် ဒီလုပ်ငန်းမှာ ဘယ်သူကအလုပ်၀င်လုပ်မှာလဲ၊ တချို့ကျတော့လည်း အရင်းအနှီးပဲ ထည့်ပြီး အလုပ်၀င်မလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစုစပ်လုပ်ငန်း မလုပ်ခင်ကတည်းက သေသေချာချာသဘောတူညီမှုတွေရှိဖို့ လိုတယ်။
အဲလိုသဘောတူညီချက်တွေရှိတယ်ဆိုမှ သဘောမတူလို့ ထွက်သွားတဲ့သူတွေကို အဲဒီ့အတိုင်း ရှင်းလို့ရမှာ။ အဲတော့ အရေးကြီးတာက အစုစပ်လုပ်ငန်းတွေ မလုပ်ခင် ဒီအစုစပ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါ၀င်မယ့်သူ အချင်းချင်းကြားမှာ သဘောတူညီချက် (Partnership agreement) တွေလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။